Bona Okulungileyo Kumsebenzi Wakho Onzima | UThando LukaThixo
Bona Okulungileyo Kumsebenzi Wakho Onzima
“Wonk’ umntu ufanele . . . abone okulungileyo kuko konke ukusebenza kwakhe nzima.”—INTSHUMAYELI 3:13.
1-3. (a) Abantu abaninzi bayijonga njani imisebenzi yabo? (b) IBhayibhile isikhuthaza ukuba siwujonge njani umsebenzi, yaye yiyiphi imibuzo esiza kuyiphendula kwesi sahluko?
AYIKHO into ekruqula abantu abaninzi namhlanje njengomsebenzi. Xa besenza umsebenzi abangawuthandiyo iba ngumnqantsa ukuphangela suku ngalunye. Yintoni enokunceda abantu abanjalo babe nomdla kumsebenzi abawenzayo de bawuthande?
2 IBhayibhile iyasikhuthaza ukuba sikuthande ukusebenza nzima. Ithi umsebenzi nesiqhamo sawo yintsikelelo. USolomon wabhala wathi: “Wonk’ umntu ufanele adle, asele aze ngokwenene abone okulungileyo kuko konke ukusebenza kwakhe nzima. Sisipho sikaThixo eso.” (INtshumayeli 3:13) Ekubeni uYehova esithanda yaye esoloko efuna izinto zisihambele kakuhle, ufuna siwuthande umsebenzi wethu kwaye sivuyele iziqhamo zawo. Ukuze sizigcine kuthando lwakhe, kufuneka siphile ngendlela afuna ngayo nangemigaqo ayibekileyo ngokuphathelele umsebenzi.—Funda iNtshumayeli 2:24; 5:18.
3 Kwesi sahluko, siza kuphendula le mibuzo mine: Sinokukubona njani okulungileyo kumsebenzi wethu onzima? Yimisebenzi enjani engawafaneliyo amaKristu enene? Sinokwenza njani ukuze umsebenzi wethu ungaphazamisani nezinto zokomoya? Yaye nguwuphi owona msebenzi ubalulekileyo esinokuwenza? Kodwa ke masiqale sixubushe ngemizekelo yabona basebenzi bakhulu kwindalo iphela—uYehova uThixo noYesu Kristu.
UMSEBÉNZI OMKHULU NOMSEBÉNZI OLICHULE
4, 5. IBhayibhile ibonisa njani ukuba uYehova ungumsebénzi okhutheleyo?
4 UYehova unguMsebénzi Omkhulu. IGenesis 1:1 ithi: “Ekuqaleni uThixo wadala amazulu nomhlaba.” Emva kokuba egqibile ukudala umhlaba, wachaza izinto azidalileyo ngokuthi “zilunge gqitha.” (Genesis 1:31) Ngamany’ amazwi wayeneliseke ngokupheleleyo nguwo wonke umsebenzi awayewenze emhlabeni. Ekubeni uYehova ‘enguThixo onoyolo,’ alithandabuzeki elokuba kwakumvuyisa kakhulu ukuba ngumsebénzi okhutheleyo.—1 Timoti 1:11.
5 UThixo wethu okhutheleyo akayeki ukusebenza. Kwiminyaka emininzi emva kokuba umhlaba nezinto ezikuwo zigqityiwe, uYesu wathi: “UBawo uyasebenza kude kube ngoku.” (Yohane 5:17) Ebesenza ntoni uYise? Ngokuqinisekileyo ebexakeke kukukhokela nokunyamekela abantu esezulwini. Ubangele ukuba kubekho ‘izidalwa ezitsha,’ amaKristu azelwe ngomoya aya kuthi ekugqibeleni alawule noYesu ezulwini. (2 Korinte 5:17) Ebesebenzela ekubeni kuzalisekiswe injongo yakhe ngabantu—ukuze abo bamthandayo bafumane ubomi obungunaphakade kwihlabathi elitsha. (Roma 6:23) UYehova umel’ ukuba uvuya ngokwenene xa ebona iziqhamo zomsebenzi wakhe. Izigidi zabantu ziye zasabela kwisigidimi soBukumkani, zatsalwa nguThixo zaza zatshintsha ubomi bazo ukuze zizigcine kuthando lwakhe.—Yohane 6:44.
6, 7. Ziziphi izinto ezenziwa nguYesu ezibonisa ukuba wayengumntu okhutheleyo?
6 UYesu ebesoloko esaziwa njengomntu okhutheleyo. Ngaphambi kokuba aphile njengomntu emhlabeni, ‘wayengumsebénzi olichule kaThixo’ xa kwakudalwa izinto zonke “emazulwini nasemhlabeni.” (IMizekeliso 8:22-31; Kolose 1: 15-17) Xa uYesu wayelapha emhlabeni, waqhubeka esebenza ngenkuthalo. Wafunda ubuchule bokwakha eselula, waziwa ‘njengomchweli.’ * (Marko 6:3) Obu bugcisa babufuna ukuba umntu asebenze nzima kwaye abe nesandla kwizinto eziliqela—ngokukodwa ekubeni ngelo xesha zazingekho iimatshini zokusarha amaplanga, iivenkile ekuthengiswa kuzo izinto zokuchwela nezixhobo ezisebenza ngombane. Khawube nombono kaYesu eyokufuna amaplanga—mhlawumbi ade agawule imithi aze ayirhuqele kwindawo awayesebenzela kuyo. Yiba nombono wakhe esakha izindlu—elungiselela ukuxhoma uphahla, esenza amacango nezinye iifanitshala? Alithandabuzeki elokuba uYesu wazivela indlela ekumnandi ngayo ukubona umsebenzi wezandla zakho owenze nzima.
7 UYesu wayekhuthele gqitha kubulungiseleli bakhe. Wayexakeke ngulo msebenzi ubaluleke gqitha kangangeminyaka emithathu enesiqingatha. Ezimisele ukufikelela abantu abaninzi kangangoko enako, wayesebenza imini yonke, evuka ngenj’ ixukuxa aze asebenze de kube sebusuku. (Luka 21:37, 38; Yohane 3:2) Waya “kwizixeko ngezixeko nakwiidolophana ngeedolophana, eshumayela yaye evakalisa iindaba ezilungileyo zobukumkani bukaThixo.” (Luka 8:1) UYesu wahamba iikhilomitha ezingamakhulu, ebetha ngezikaTshiwo kwiindlela ezinothuli esisa isigidimi seendaba ezilungileyo ebantwini.
8, 9. UYesu wakubona njani okulungileyo ngokukhuthalela umsebenzi wakhe?
8 Ngaba uYesu wakubona okulungileyo xa wayesebenza ngenkuthalo entsimini? Ewe! Watyala imbewu yenyaniso yoBukumkani, eshiya amasimi alungele ukuvunwa. Ukwenza umsebenzi kaThixo kwakumomeleza yaye kumlondoloza uYesu kangangokuba wayede ancame nokutya xa ewenza. (Yohane 4:31-38) Khawuthelekelele indlela amele ukuba wayaneliseke ngayo xa, emva kokuba egqibe ubulungiseleli bakhe basemhlabeni, wayenikela ingxelo kuYise esithi: “Ndikuzukisile emhlabeni, ekubeni ndiwugqibile umsebenzi obundinikile ukuba ndiwenze.”—Yohane 17:4.
9 Ngokuqinisekileyo uYehova noYesu bayimizekelo ebalaseleyo yabantu ababona okulungileyo xa babesebenza ngenkuthalo. Xa simthanda uYehova ‘siyamxelisa.’ (Efese 5:1) Xa simthanda uYesu ‘silandela emanyathelweni akhe ngokusondeleyo.’ (1 Petros 2:21) Ngoku makhe sixubushe ngendlela esinokubona ngayo okulungileyo xa siwukhuthalele umsebenzi.
INDLELA ESINOKUKUBONA NGAYO OKULUNGILEYO XA SIKHUTHELE
Ukusebenzisa imigaqo yeBhayibhile kunokukunceda ubone okulungileyo ngokusebenza kwakho ngenkuthalo
10, 11. Yintoni enokusinceda sibe nesimo sengqondo esihle ngomsebenzi wethu?
10 NamaKristu enene kuye kufuneke aphangele. Siyafuna ukuwuvuyela umsebenzi wethu, kodwa loo nto isenokuba nzima ukuba senza umsebenzi esingawuginyi ncam. Xa kunjalo, sinokukubona njani okulungileyo kumsebenzi wethu?
11 Ngokuba nesimo sengqondo esihle. Maxa wambi sinokungakwazi ukutshintsha iimeko zethu, kodwa sinokukwazi ukutshintsha isimo sengqondo sethu. Ukucamngca ngendlela uThixo azijonga ngayo izinto kunokusinceda sibe nesimo sengqondo esihle ngomsebenzi. Ngokomzekelo, ukuba uyintloko-ntsapho, khumbula ukuba enoba umsebenzi wakho ubonakala uphantsi kangakanani, uyakunceda ukuba wondle intsapho yakho. Ukunyamekela intsapho yakho yimbopheleleko ebalulekileyo kuThixo. ILizwi lakhe lithi umntu ongayinyamekeliyo intsapho yakhe “mbi ngaphezu kongakholwayo.” (1 Timoti 5:8) Ukwazi ukuba umsebenzi wakho uyindlela yokufikelela usukelo onalo—ukufeza imbopheleleko oyinikwe nguThixo—kunokukunceda uwuthande umsebenzi wakho kwaye usebenze ngenjongo kunabanye abantu ophangela nabo.
12. Kunomvuzo njani ukukhuthala nokunyaniseka emsebenzini?
12 Ngokukhuthala nangokunyaniseka. Ukukhuthala nokufunda ukwenza umsebenzi wakho kakuhle kunokukuzisela iintsikelelo. Abaqeshi badla ngokubaxabisa kakhulu abasebenzi abakhutheleyo nabanesandla emsebenzini. (IMizekeliso 12:24; 22:29) NjengamaKristu enene, simele sinyaniseke emsebenzini—singebi imali, izinto esisebenza ngazo, okanye ixesha lomsebenzi. (Efese 4:28) Njengoko siye sabona kwisahluko esandulela esi, ukunyaniseka kunomvuzo. Umsebénzi owaziwa ngokunyaniseka udla ngokuthenjwa. Yaye enoba umqeshi uyayiphawula indlela esikhuthele ngayo okanye akayiphawuli, sinokwaneliswa kukuba “nesazela esinyanisekileyo” nokwazi ukuba siyamkholisa uThixo esimthandayo.—Hebhere 13:18; Kolose 3:22-24.
13. Ukuba ngumzekelo omhle emsebenzini kunokuba nayiphi imiphumo?
13 Ngokwazi ukuba indlela esiziphethe ngayo inokumzukisa uThixo. Xa siziphethe njengamaKristu emsebenzini, baya kuyibona loo nto nabanye. Ube yintoni ke umphumo? Siya ‘kuyihombisa imfundiso yoMsindisi wethu, uThixo.’ (Tito 2:9, 10) Ewe, indlela esiziphatha ngayo inokwenza abantu batsaleleke kunqulo lwethu. Khawuthelekelele indlela obuya kuvakalelwa ngayo ukuba omnye wabantu ophangela nabo ebenokwamkela inyaniso ngenxa yomzekelo wakho omhle emsebenzini! Okubaluleke nangakumbi koku: Ayikho into enokuba mnandi njengokwazi ukuba ukuziphatha kwakho kakuhle kuzukisa uYehova yaye kuvuyisa intliziyo yakhe!—Funda iMizekeliso 27:11; neyoku-1 kaPetros 2:12.
UKUSEBENZISA UKUQONDA XA SIKHETHA UMSEBENZI
14-16. Yiyiphi imibuzo ebalulekileyo ekufuneka sicinge ngayo xa sisenza izigqibo ngomsebenzi?
14 IBhayibhile ayisiniki iinkcukacha ngezinto ezifanelekileyo nezingafanelekanga emsebenzini. Loo nto ayithethi kuthi sinokwamkela nawuphi na umsebenzi. IZibhalo zinokusinceda sikhethe umsebenzi onemveliso nonyanisekileyo oya kumkholisa uThixo, size siwuyeke umsebenzi ongamkholisiyo. (IMizekeliso 2:6) Xa kufuneka senze isigqibo ngomsebenzi, simele sicinge ngemibuzo emibini ebalulekileyo.
15 Ngaba lo msebenzi uza kundenzisa izinto ezikhatywayo yiBhayibhile? ILizwi likaThixo likukhaba ngaw’ omane ubusela, ukuxoka, nokwenza izithixo. (Eksodus 20:4; IZenzo 15:29; Efese 4:28; ISityhilelo 21:8) Asifuni nokuwubona umsebenzi ofuna senze ezo zinto. Xa simthanda uYehova asiyi kwamkela umsebenzi oya kufuna saphule imithetho yakhe.—Funda eyoku-1 kaYohane 5:3.
16 Ngaba ukwenza lo msebenzi kuya kundenza ndibe negalelo okanye ndikhuthaze umkhwa ophosakeleyo? Masenze umzekelo. Ukuba ngumamkeli wabantu (receptionist) enkampanini akuphosakelanga. Kodwa ke, kuthekani ukuba umKristu ufumana lo msebenzi kwikliniki yokuqhomfa? Ewe kona, umsebenzi wakhe ubungayi kufuna ukuba ancedise ngokungqalileyo ekuqhomfeni. Kodwa ke, ngaba umsebenzi awenza mihla le ubungayi kuxhasa oko kwenziwa kuloo kliniki yokuqhomfa—okungumkhwa owalelwayo kwiLizwi likaThixo? (Eksodus 21:22-24) Ekubeni simthanda uYehova, asifuni kuba nento yokwenza nezinto ezingqubana nezibhalo.
17. (a) Ziziphi izinto esinokucinga ngazo ngaphambi kokuba senze izigqibo ngomsebenzi? (Bona ibhokisi ethi “ Ndiwuthathe Na Lo Msebenzi?”) (b) Izazela zethu zinokusinceda njani senze izigqibo ezimkholisayo uThixo?
17 Iingxaki ezininzi eziphathelele umsebenzi zinokucombululeka ngokucingisisa nzulu ngeempendulo zemibuzo emibini ebalulekileyo ekwisiqendu se-15 nese-16. Ukongezelela koko, zikho nezinye izinto esifanele sicinge ngazo xa sisenza izigqibo ngomsebenzi. * Asinakulindela ukuba udidi lwekhoboka elithembekileyo lubeke imithetho eya kulawula zonke iingxaki ezivelayo. Sifanele sisebenzise ukuqonda. Njengoko siye safunda kwiSahluko sesi-2, kufuneka siqeqeshe izazela zethu ngokufunda indlela yokusebenzisa iLizwi likaThixo ebomini bethu. Xa ‘amandla ethu okuqonda’ siwaqeqesha “ngokuwasebenzisa” ngolo hlobo, izazela zethu zinokusinceda senze izigqibo ezimkholisayo uThixo size sikwazi ukuzigcina kuthando lwakhe.—Hebhere 5:14.
NDIWUTHATHE NA LO MSEBENZI?
Umgaqo: “Zonke izinto zenzeleni uzuko lukaThixo.”—1 Korinte 10:31.
Ngaba lo msebenzi undenzisa izinto ezingqubanayo neLizwi likaThixo?—Eksodus 20:13-15.
Ngaba ukuwenza lo msebenzi kundenza ndibe negalelo kumkhwa ongavumelekanga?—ISityhilelo 18:4.
Ngaba lo ngumsebenzi oluncedo ebantwini ongangqubaniyo neZibhalo?—IZenzo 14:16, 17.
Ngaba lo msebenzi uya kuzikhathaza izazela zabanye abantu?—Roma 14:19-22.
Ukuba ndifumana umsebenzi kwelinye ilizwe ndize ndishiye intsapho yam, loo nto inokuyiphatha njani intsapho yam ngokomoya nangokweemvakalelo?—Efese 5:28–6:4.
UKUBA NEMBONO ELUNGELELENEYO NGOMSEBENZI
18. Kutheni kungeyondlwan’ iyanetha nje ukuhlala silungelelene ngokomoya?
18 Akuyondlwan’ iyanetha ukulungelelana ngokomoya kule “mihla yokugqibela” ‘yamaxesha amanqam ekunzima ukujamelana nawo.’ (2 Timoti 3:1) Kunzima ukufumana umsebenzi nokuwugcina. NjengamaKristu enene, siyazi ukuba kubalulekile ukusebenza nzima ukuze sinyamekele iintsapho zethu. Ukuba asilumkanga, sinokuzibona sele sindlandlathekiswa yingcinezelo yasemsebenzini okanye evela kumoya wokuthand’ izinto eziphathekayo owosulelayo weli hlabathi, de sizibekele bucala izinto zokomoya. (1 Timoti 6:9, 10) Makhe sibone indlela esinokuhlala silungelelene ngayo, ukuze siqiniseke “ngezinto ezibaluleke ngakumbi.”—Filipi 1:10.
19. Kutheni sifanele simthembe ngokupheleleyo uYehova, yaye ukumthemba ngolo hlobo kusinceda ukuba siphephe ntoni?
19 Mthembe ngokupheleleyo uYehova. (Funda iMizekeliso 3:5, 6.) Ngaba ukho omnye umntu esinokumthemba? Kaloku nguye osikhathelelayo. (1 Petros 5:7) Uzazi bhetele kunathi izinto esizifunayo, yaye unesandla esivulekileyo. (INdumiso 37:25) Ngoko phulaphula xa iLizwi lakhe lisikhumbuza ngala mazwi: “Musani ukuba ngabathandi bemali, kunoko yanelani zizinto ezikhoyo. Kuba [uThixo] uthe: ‘Andiyi kuze ndikushiye, ndingayi kuze ndikutyeshele.’” (Hebhere 13:5) Abakhonzi bakaThixo abaninzi abakwinkonzo yexesha elizeleyo banokungqina ukuba uyakwazi ukunyamekela abantu bakhe. Ukuba uYehova simthemba ngokupheleleyo ukuba uya kusinyamekela, asiyi kuzixhalabisa ngokugqith’ emgceni ngokunyamekela iintsapho zethu. (Mateyu 6:25-32) Asiyi kuvumela umsebenzi usenze sityeshele izinto zokomoya, ezinjengokushumayela iindaba ezilungileyo nokuya kwiintlanganiso.—Mateyu 24:14; Hebhere 10:24, 25.
20. Kuthetha ukuthini ukugcina iliso lakho lingenakumbi, yaye unokuhlala njani uneso simo sengqondo?
20 Iliso lakho malihlale lingenakumbi. (Funda uMateyu 6:22, 23.) Ukuba neliso elingenakumbi kuthetha ukuphila ubomi obulula. Iliso elingaboni izinto ezininzi lijonga into enye nje kuphela—ukwenza ukuthanda kukaThixo. Xa iliso lethu lijonge kwinto enye, asiyi kuzikhathaza ngokufumana imisebenzi ehlawula inkuntyula yemali nangokuphila ubomi obutofotofo. Kananjalo asiyi kuthi phithi kukufuna izinto zamvanje nezizezona zikumgangatho ophezulu abathi ababhengezi asiyi konwaba ngaphandle kwazo. Unokuligcina njani iliso lakho lingenakumbi? Mus’ ukuzifaka ematyaleni angeyomfuneko. Mus’ ukuzithwalis’ uxanduva ngezinto ezitya ixesha elininzi nezifuna ingqalelo. Phulaphula isiluleko seBhayibhile esithi simele saneliswe kukuba “nesixhaso nesambatho.” (1 Timoti 6:8) Zama ukubenza lula ubomi bakho kangangoko kunokwenzeka.
21. Kutheni kufuneka sizazi izinto eziza kuqala, yaye yintoni efanele ize kuqala ebomini bethu?
21 Zazi izinto zokomoya eziza kuqala, uze uzenze. Ekubeni singenakukwazi ukwenza zonke izinto esifuna ukuzenza ebomini, simele sizazi izinto eziza kuqala. Kungenjalo, izinto ezingabalulekanga zinokutya ixesha lethu, size singabi nalo ixesha lokwenza izinto ezibalulekileyo. Yintoni efanele ize kuqala ebomini bethu? Abantu abaninzi ehlabathini bathi eyona nto ibalulekileyo kukufunda de uyityekeze ukuze ufumane umsebenzi ohlawulayo kule nkqubo yezinto. Noko ke, uYesu wabongoza abalandeli bakhe ukuba ‘baqhubeke befuna kuqala ubukumkani.’ (Mateyu 6:33) Ewe, njengamaKristu enene, sibeka uBukumkani bukaThixo kuqala ebomini bethu. Ubomi esibuphilayo—ukhetho esilwenzayo, usukelo esizibekela lona nezinto esizenzayo—bufanele bubonise ukuba eyona nto ibalulekileyo zizilangazelelo zoBukumkani nokuthanda kukaThixo kunokuxakeka zizinto eziphathekayo nezinto zehlabathi.
“ISIGQIBO ENDISENZILEYO SINDENZE NDONWABA NDAZA NDANELISEKA”
“Ndapasa emagqabini kwizifundo zam ndaza ndafumana ibhasari yokuya kufunda kwisikolo esaziwayo saseNew York City. Abacebisi bam ngezifundo zesikolo bandiphembelela ukuba ndifake isicelo sokuya kwiiyunivesithi eziliqela ezidumileyo. Uninzi lwazo lwandamkela ndada ndafumana ibhasari yokuya kufunda kwenye yeeyunivesithi ezaziwayo eUnited States. Kodwa ke, andizange ndivume ngenxa yezizathu ezibini. Ndaqonda ukuba ukuhlala esikolweni kude nekhaya kwakuya kundibeka engozini yokuziphatha kakubi, kwaye ndandikunqwenela kakhulu ukuba nguvulindlela.
“Ngoku sele ndineminyaka engaphezu kwama-20 ndinguvulindlela othe ngxi. Ndiye ndazigcina ndixakekile ziinkalo eziliqela zobulungiseleli—bendikhonza apho kufuneka abavakalisi abangakumbi khona, ndincedisa ekwakheni iiHolo zoBukumkani, nakumsebenzi wokunceda xa kuhle intlekele. Ngoku ndikwiqela lolwimi lwasemzini eNew York City.
“Xa ndicinga ngeminyaka endiyichithe kwinkonzo yexesha elizeleyo, ndiyayibona indlela endisikeleleke ngayo. Isigqibo endasenzayo sindenze ndonwaba ndaza ndaneliseka. Ayikho into enokugqitha amava endiwafumeneyo nabahlobo endinabo.”—Zenaida.
Sinokumbonisa uYehova ukuba siyamthanda xa umsebenzi wokushumayela siwubeka kwindawo yokuqala
22, 23. (a) Nguwuphi owona msebenzi ubalulekileyo owenziwa ngamaKristu enene, yaye sinokubonisa njani ukuba lo msebenzi ubalulekile kuthi? (Bona ibhokisi ethi “ Isigqibo Endisenzileyo Sindenze Ndonwaba Ndaza Ndaneliseka.”) (b) Yintoni ozimisele ukuyenza ngomsebenzi wakho wempangelo?
22 Ekubeni sisazi ukuba siphila ngasekupheleni kwemihla yokugqibela, eyona nto isezingqondweni zethu ngumsebenzi obalulekileyo wamaKristu enene—ukushumayela nokwenza abafundi. (Mateyu 24:14; 28:19, 20) NjengoMzekelo wethu, uYesu, sifuna ukuxakeka ngulo msebenzi usindisa abantu. Sinokubonisa njani ukuba lo msebenzi ubalulekile kuthi? Abantu bakaThixo abaninzi baziphosa nofele kumsebenzi wokushumayela njengabavakalisi bebandla. Abanye baye benza uhlengahlengiso ebomini ukuze babe ngoovulindlela okanye abavangeli basemazweni. Abazali abaninzi baye bakhuthaza abantwana babo ukuba babe kwinkonzo yexesha elizeleyo ngenxa yokubona ukubaluleka kokuba nosukelo lokomoya. Ngaba abavakalisi boBukumkani bayakubona okulungileyo ngokukhuthala kwabo entsimini? Kunjalo kanye! Ukuba sikhonza uYehova ngomphefumlo uphela, ngokuqinisekileyo siya kuphila ubomi obuvuyisayo, obanelisayo nobuzaliswe ziintsikelelo.—Funda iMizekeliso 10:22.
23 Uninzi lwethu kufuneka luchithe iiyure eziliqela emsebenzini ukuze londle iintsapho zalo. Khumbula ukuba uYehova ufuna sibone okulungileyo xa siwukhuthalele umsebenzi. Sinokwaneliswa ngumsebenzi esiwenzayo ukuba isimo sengqondo esinaso nezenzo zethu zivisisana nembono yakhe nemigaqo ayimiseleyo. Noko ke, masizimisele ukuba singaze sivumele umsebenzi wempangelo usiphazamise kowona msebenzi wethu ubalulekileyo—ukuvakalisa iindaba ezilungileyo zoBukumkani bukaThixo. Ukuba lo msebenzi siwubeka kwindawo yokuqala kubomi bethu, sibonisa ukuba siyamthanda uYehova yaye sihlala kuthando lwakhe.
^ isiqe. 6 Igama lesiGrike eliguqulelwe ngokuthi “umchweli” kuthiwa libhekisela “kumntu osebenza ngamaplanga enoba wakha izindlu okanye ifanitshala okanye nantoni na eyenziwa ngamaplanga.”
^ isiqe. 17 Ukuze ufumane ingcombolo ngezinto eziphathelele umsebenzi, bona IMboniselo ka-Aprili 15, 1999, iphepha lama-28 ukuya kwelama-30, nekaJanuwari 1, 1983, iphepha lama-28.
Ukushumayela NgoBukumkani—Kushunyayelwa Iindaba Ezilungileyo Emhlabeni Wonke